Global Voices teny Malagasy » Carabaos Sy Ny Tanimbary: Topimaso Amin’ny Fiainana Any Ambanivohitr’i Filipina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Novambra 2017 15:15 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Henoy, tsy renareo ve ny hiran'ny fiainana vaovao avy amin'ireo saha sy ireo tendrombohitra? Sary sy maribolana an'i Lito Ocampo, fampiasàna nahazoana alàlana
Tsidihan'i Lito Ocampo, bekotro maroholatra mpakasary sady mpikatroka, matetika ny tanàna nahaterahany ao Pampanga, tanàna iray miorina ao amin'ny faritra afovoan'ny nosy Luzon ao Filipina, mba hialàny amin'ny tabataba sy ny loto ao amin'ny faritr'i Manille renivohitra.
Mampitamberina aminy ny fahazazany ireo fitsidihana ataony amin'ny fankafizana ny hatsaran'ny toerana nahaterahany.
Amin'ireo sary izay ifampizaràny amin'ny Global voices, tsy ireo sehatra mampiavaka manokana ao amin'ny tanàna iray mpamboly ihany akory no nopihany ho sary, fa angamba koa, mety tsy ho tsy fanahy niniany, ny endriky ny  fambolena ao Filipina.
Ohatra, ny fampiasana miely patrana ny carabaos dia ahitàna taratra ny fepetra fahiny amin'ny sehatry ny fambolena ao amin'ny firenena, amin'ny ankapobeny. Ny fampiasana ireo arabe hanahazana ireo vokatra dia midika ho tsy fahampian'ireo toerana natokana ho an'ireo tantsaha.
Ankoatra ny fiainana ambanivohitra maharevo, mampatsiahy amin'ireo mpakasary tanora i Ocampo mba hianatra momba ny fakàna ny toeran'ireo mponina eny ambanivohitra, indrindra indrindra ireo tantsaha, izay anisan'ireo maro an'isa tena mahantra indrindra ao amin'ny firenena sady itataovan'ireo loza ara-pahasalamana ateraky ny asa mamola-damosina ataon'izy ireo eny an-tsaha.
Miaraka amin'ny fitohizan'ny fanitarana tanàndehibe, maro be ireo vohitra ambanivohitra sy ireo mponina amin'ny tontolo maitso sahala amin'ny tanàna nahaterahan'i Ocampo no mety hivadika tampoka ho toerana fanaovana raharaham-barotra na toerana fizahantany. Araka izany, ireo sarin'i Ocampo dia azo ampiasaina ihany koa mba hampianarana ny vahoaka momba ireo olana amin'ny fampiasana ny tany, ny dingana misy ny fandaharanasa fanavaozana ny fambolena ary ny filàna maika ny hiarovana ny tontolo iainana.
Ndeha hanao fitsidihana virtoaly an'i Sta. Tanànan'i Rita ao amin'ny faritanin'i Pampanga.
Taorian'ireo mpanjono, ireo tantsaha indray no nanara-dia an'ireo sehatra mahantra indrindra ao Filipina. Sary an'i Lito Ocampo, fampiasàna nahazoana alàlana.
Tagak (vanobe na egret) eny an-tampon'ny carabao. Sary an'i Lito Ocampo, fampiasàna nahazoana alàlana.
Voatery mampiasa arabe ireo tantsaha mba hanahazana ireo vokatra noho ny tsy fisian'ny toerana. Sary an'i Lito Ocampo, fampiasàna nahazoana alàlana.
fiantsonan'ny “fiara”. Tranon'ny carabao. Sary an'i Lito Ocampo, fampiasàna nahazoana alàlana.
Lito Ocampo, mpakasary, tao amin'ny lakandrano iray
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/27/111009/
 endriky ny: https://globalvoices.org/2016/08/23/philippine-sugar-farmers-facing-another-dead-season-turn-to-government-for-help/